Furayaasha ugufiican ee jimicsiga aado oo aanad ku dhiman isku dayga | Ragga Stylish
Waqtiyada qaar nolosheena dhamaanteen waxaan ka walwalsanahay tagida qolka jirdhiska. Jidhkeenu had iyo jeer maahan sida aan dooneyno inuu noqdo mararka qaarna waxaan ku mashquulnaa jirka. Waxaa warbaahinta nagu qarxiyay sawirro dad aan dabiici ahayn oo aan u maleyno inaan higsan karno. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadu aad ayey uga fog tahay meydadkaas kiimikada ku lug leh. Haddii aad waligaa soo jeedisay inaad aado qolka jimicsiga oo aad ku guuldareysato isku dayga, waad is aqoonsan doontaa.
Maqaalkan waxaan ku siineynaa xoogaa furayaal ah si aad jimicsiga u aado wuxuu noqonayaa qaab nololeed cusub wuxuuna kaa caawinayaa inaad xalliso dhibaatooyinkaaga oo aad natiijooyin hesho.
1 Tag jimicsiga, maxaa loogu talagalay?
2 U hogaansanaanta qorshaha
3 Tag qolka jimicsiga si aad ula kulanto dadka
4 Cuntada iyo jimicsiga
Tag jimicsiga, maxaa loogu talagalay?
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad iska caddeyso markaad bilaabeysid xiisaha aad u aadeyso qolka jimicsiga ayaa ah inaad ogaato ujeeddada aad aadeyso. Ujeedadu waxay u badan tahay in ugu horreyn la isku qurxiyo. In kasta oo ay jiraan dad badan oo jecel tartanka ama waxqabadka isboortiga, caadiyan ujeeddooyinka la raadinayo ayaa ah kuwo si buuxda u qurux badan.
In kasta oo tababarayaasha shaqsiyadeed ay dabooli karaan himilooyin kala duwan oo hal qof ah, haddana waxay had iyo jeer u tarjuntaa labada ujeedo ee waaweyn: luminta dufanka iyo murqaha oo kordha. Dad badan ayaa raadiya labadan himilo isku mar. Waxaad u badan tahay inaad maqashay oraahda "haa, waxaan rabaa inaan baruurteyda u beddelo murqo" kun jeer. Tan laguma guuleysan karo, marka laga reebo qaar gaar ah oo gaar ah iyo waqti aad u gaaban. Gabi ahaanba waa hadafyo lid ku ah in la gaaro.
Waxaas oo dhan, waa inaad nafsaddaada maskaxda gelisaa oo aad tidhaahdaa maxaan raadinayaa markaan aadayo qolka jimicsiga? Tegitaanka si aad u qaaddo miisaanka ama aad uhesho qaab ahaan badiyaa hadaf sax ah ma ahan. Miisaan qaadistu kaliya ma gubto kalooriyada sida ay dad badani u maleeyaan. Intaas waxaa sii dheer, dabiici ahaan, haddii aadan u qeybineynin nafaqooyinka iyo kalooriyada cuntada ee waafaqsan ujeedada aad raadineyso, si dhib leh kuma heli doontid natiijooyin.
Xaqiiqdii waxaad tagtay qolka jimicsiga waxaadna arkeysaa dad soo jiray sannado oo had iyo jeer isku mid ah. Tani waa sababta oo ah kuma foogan ujeeddo gaar ah. Haddii aad rabto inaad ku sii socoto jimicsiga, waa inaad doorataa yoolkaaga.
U hogaansanaanta qorshaha
Markaad qorsheyneyso inaad aado qolka jimicsiga, waxaad raadineysaa wax aad ku horumariso. Laakiin tan uma arki kartid waajibaad, laakiin waxaad u aragtaa wax aad jeceshahay oo aad ku qanacsan tahay inaad wax qabato. Isbeddelkaan waxaa loo yaqaan u hoggaansamid. Ka soo qaad in aad haysato cuntada ugu fiican adduunka iyo qorshaha tababarka ugu fiican ee diiradda lagu saaray helitaanka murqaha. Faa’iido ma leh haddii qorshahaasi qaali kugu yahay inaad fuliso, adiga oo aanad dareen u hayn, waxaad u aragtaa inay tahay waajib ama wuu ku caajisiinayaa. Qorshaha isboortiga waa inuu adiga kugu habboon yahay oo uusan adiga kugu habboonayn.
U hoggaansamiddu waa waxa damaanad qaadaya natiijooyinka muddada-dheer. Haddii tababarkaaga iyo qorshahaaga cuntada ay ka fiicnaadaan ama ka sii daraan, haddii aad raacdo muddo dheer, waxaad ogaan doontaa natiijooyin. Tayada natiijooyinka ayaa la arkaa iyada oo ku xidhan tayada qorshaha iyo dadaalka aad gelisay. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la helo tababare shakhsi ah oo kaa caawiya dhammaan doorsoomayaasha ay tahay in loo maareeyo tababarka iyo nafaqada si aad u gaarto hadafyadaada.
Dejinta yoolal macquul ah ayaa waliba kaa caawinaysa. Waxaan u baranay inaan yeelano maskax gaaban oo aan ku nidhaahno "Waxaan rabaa inaan noqdo qof noocaas ah 3 bilood gudahood." Tani maahan mid macquul ah. Qofku markuu yahay qof aan laylis lahayn oo uusan waxbaran noloshiisa, illaa 6da bilood ee ugu horreysa tababarka wuxuu caadi ahaan horumar ku sameeyaa wax yar oo uu sameeyo, xitaa haddii uusan haysan cunto aad u dheellitiran. Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo wakhtigaas, jimicsiga jimicsiga ayaa soo baxa. Waana taas, si kasta oo aad isugu daydo, haddii aadan raacin cuntada sida ku xusan ujeeddadaada, ma awoodi doontid inaad horumar sameysid.
Tag qolka jimicsiga si aad ula kulanto dadka
Khalad kale oo dadku inta badan sameeyaan ayaa ah inay aadaan qolka jimicsiga si ay ula kulmaan dadka. Waa runtaa mar alla markii aad halkaa gaadho, taabashadu inay kalgacal samayso. Waxaad arkaysaa dad isku mid ah maalin kasta. Tani waxay ka dhigeysaa, inyar yar, waxaad kasbatay kalsooni xitaa waxaad bilaabi kartaa saaxiibtinimo cusub. Laakiin si daacad ah, Uma maleynayo inay waxtar leedahay in la bixiyo qolka jimicsiga si kor loogu qaado culeyska inta lala sheekaysanayo saaxiibbada kale
Micnaheedu maaha inaadan saaxiibo ku lahayn qolka jimicsiga, laakiin waa in waqtiga la adeegsadaa. Waad la hadli kartaa intaad ku guda jirto fasaxyada jimicsiga oo u baahan laba daqiiqo ama in ka badan oo dib loo buuxiyo, tusaale ahaan. Laakiin kaliya maahan tan.
Waxaad u badan tahay inaad sidoo kale maqashay weedha ah "80% tababarku waa cunto." Isagu ma aha sabab la'aan. Waa muhiim in la doorto mudnaanta marka la dhisayo qorshe tababar. Waxa ugu muhiimsan waa waxa aan kor ku soo sheegay, u hoggaansamid. Macno malahan hadii aad qorshe fiican leedahay, hadaadan raaci karinna, waxaad moodaa inaadan raacin.
Ta labaadna waa isu dheelitirka tamarta. Haddii aadan ku jirin dheeri ahaan kalooriga si aad uhesho murqaha, ma awoodi doontid inaad sameyso. Sidoo kale, haddii aadan ku jirin dhimista kalooriga, ma awoodi doontid inaad lumiso dufanka. Ay weheliso jimicsi jimicsi leh culeysyo iyo jimicsi wadnaha ah, waxaad awoodi doontaa inaad ku guuleysato yoolalkaaga.
Mudnaanta saddexaad ayaa noqon doonta qaybinta nafaqeeyayaalka yar yar. Bixinta wanaagsan ee borotiinka, dufanka iyo karbohaydraytyada marka loo eego ujeeddooyinka ayaa gebi ahaanba lagama maarmaan u ah in jidhku hore u socdo. Haddii jirkaagu uusan helin nafaqooyinka uu u baahan yahay, ma awoodi doono inuu dhiso nudaha muruqyada cusub ama ka soo kabsado jimicsiga.
Nafaqeeyayaalka yar yar sidoo kale waa muhiim maxaa yeelay waxay taageeraan shaqooyin badan oo jirka muhiim u ah. Ka qayb qaadashada wanaagsan ee khudaarta iyo miraha cuntada waa muhiim.
Ugu dambeyntii iyo ugu yaraan, xitaa haddii dadku u maleynayaan inay tahay tan ugu weyn, waxaa jira kaabis isboorti. Waxaa jira been badan oo been abuur ah oo leh kaabis sababtoo ah warshadaha isboortiga. Si kastaba ha noqotee, waxay kaliya u adeegtaa inay ku caawiso wax yar iyo, illaa iyo inta aasaaska qorshahaagu ay yihiin kuwo adag oo si fiican u dhisan.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkan aad waxbadan ka baran karto sida jimicsiga loogu aado aqoonta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Tag jimicsiga